Gudiga Arrimaha Bini’aadanida iyo Xuquuqul insaanka oo Maanta Booqday Qaar ka Mid ah Xeyaha Barakacayasha ee Muqdisho“SAWIRRO” | Radio Muqdisho
Gudiga Arrimaha Bini’aadanida iyo Xuquuqul insaanka oo Maanta Booqday Qaar ka Mid ah Xeyaha Barakacayasha ee Muqdisho“SAWIRRO”
Published on June 22, 2013 by Cilmi Waare · No Comments · 2,396 views
Guddiga arrimaha Bini’aadanimada iyo xuquuqul Insaanka Baarlamanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah xeryaha Barakacayasha ee magaalada muqdisho.
Gudoomiye ku xigeenka gudiga xuquuqul Insaanka iyo arrimaha Bini’aadanimada ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Muuse Sheekh Cumar oo horkayay xubnaha guddigaasi ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in ajeedada kormeerkoodu uu yahay u kuur galidda xaalada nololeed ee Barakacayaasha ku nool xerooyinka Muqdisho.
Mudanayaasha ayaa kormeerkooda ka bilaabay xerada Barakacayasha ee loo yaqaano Sayidka kuna taala Beerta Daraawiishta ee degmada Howlwadaag iyagoo halkaasi warbixin uga dhageystay Gudoomiye ku xigeenka Kaamkaasi Sugoow Isaaq Maxamed oo sheegay in Kamka ay ku noolyiniin ilaa Sadex Kun oo Barakacayaal ah kuwaa oo aan heysan hooy ay ka galaan dhibicda roobabkii Muqdisho ka da’ayay saacadihii la soo dhaafay.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaa ku daray in aysan heysan cunto, waxbarasho iyo adeeg caafimaad, wuxuna xusay in aysan jirin wax gargaar ah oo ay heleen muddo ku siman labo sanadood.
Xildhibaan Muuse oo halkaasi ka hadlay ayaa barakacayaasha u sheegay in nolol xumada iyo daryeel la’aanta heysata ay u gudbin doonaan Dowladda si wax loogu qabto, wuxuuna ka dalbaday hay’adaha gargaarka inay gurmad la soo gaaraan dadkan danyarta ah.
Kormeerka gudigan ayaa imaanaya xilli barakacaayasha ay saameeyn adag ku yeesheen roobab saacadihii la soo dhaafay ka da’ayay magaalada Muqdisho,iyadoo ay u sii dheertahay dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah oo ay hore uga cabanayeen.